Manage mafaera mu macOS nenzira yakapusa ne Filepane | Ndinobva mac
Kunyangwe chiri chokwadi kuti iyo Finder inotipa iyo hombe nhamba yemabasa, mazhinji acho asiri eakajeka kune macOS, zvirokwazvo vamwe venyu nguva dzose unosuwa rimwe basa iyo iwe yaungade Apple isanganise mune ramangwana vhezheni yeApple's operating system yeMacs
Kana iyo Tsvaga ichikuziva zvishoma, uye iwe uri mushandisi wakasimba kana zvasvika pakufambisa mafaira akatenderedza komputa yako, iyo Filepane application inogona kunge iri iyo yauri kutsvaga. Filepane ine basa rekuvandudza ruzivo rwevashandisi kana uchikweva nekudonhedza mafaira pakati pemafaira akasiyana pakombuta yedu, izvo zvinotibvumidza kuti tiwedzere kugadzirwa kwedu.
Crop, saizi, shandura kune akasiyana mafomati, tenderera mifananidzo pamwe nekuadzvanya.
Wedzera zvirevo kune screenshots nemifananidzo (chinhu chinouya neiyo yekupedzisira vhezheni yeMacOS Mojave natively)
Kopa kana kufambisa mafaera pakati pemaforodha atinoshandisa kazhinji.
Kurumidza kugovera kuburikidza neAirDrop, email, social network (mune zvifananidzo kana mavhidhiyo ...)
Chinja mafaera muPDF fomati kuita mifananidzo muJPG, PNG, BMP uye TIFF mafomati.
Gadzira akajeka zvinyorwa zvemavara, mu .rtf, Shoko uye Excel fomati mune dhairekitori iwe kwaunoda, pasina kana kumbobvira wafambisa iyo faira iwe yawakagadzira neye inoenderana application.
Kana tangoisa Filepane, iyi zvinongedzo kune Tsvaga, saka nguva dzese padzinoona kuti tinoda kufambisa kana kuteedzera mafaera, kana kunyorwa mameseji nemifananidzo, inozotanga kushanda kutipa dzakateedzana sarudzo dzine chekuita nezvatingaite, zvinozotibvumidza kuti tiwedzere kugadzirwa kwedu.
Filepane ine mutengo muMac App Store ye7,99 euros, inoda OS X 10.10 uye yakagadzirirwa kushanda nema 64-bit processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Manage mafaera mune macOS nenzira yakapusa neFilepane